DOOGEE V: Soo bandhigid-dhamaadka-sare ah MWC 2018 | Androidsis
Tirada soo saarayaasha tagaya MWC 2018 aad ayey u badan yihiin. Tani waa waxa ka dhigaya dhacdada mid xiiso leh, maaddaama aan la kulanno taleefannada kala duwan. DOOGEE waa mid ka mid ah noocyada badan ee ka soo qeyb gala munaasabadda ka socota magaalada Barcelona. Nooca Shiinaha ayaa sii wadaya inuu kasbado sumcad iyo joogitaanka suuqa. Sidaa darteed, waxay ka faa'iideystaan ​​fursadda soo bandhig DOOGEE-gaaga cusub V.
Taleefankan ayaa loogu talagalay inuu noqdo astaanta cusub ee astaanta. Taleefan leh qeexitaanno aad u dhammeystiran oo ay calaamaddu dooneyso inay gasho qaybaha suuqa cusub. In kasta oo DOOGEE Vani uu sii wado qiimaha weyn ee lacagta taasi waxay sumadda ka dhigtay caan.
Shirkaddu waxay dooratay inay adeegsato tiknoolajiyaddii ugu dambeysay ee taleefanka. Marka waxaan la kulanay qalab aad uga duwan waxyaabihii ay horay u qabteen oo dhan. Waxay u taagan tahay gaar ahaan xaqiiqda ah in Hayso dareeraha sawirka faraha ee lagu dhejiyay shaashadda. Waa wax sumado badani isku dayeen in muddo ah. Taasina DOOGEE V horey ayey u leedahay.
Qalabku wuxuu leeyahay shaashad AMOLED 6,21-inji ah oo leh saamiga 19: 9 iyo xalka 2248 x 1080 pixels.. Intaa waxaa dheer, waa taleefan ka faa'iideysanaya xagga hore in badan, maaddaama shaashadda ay ku jirto 94,85% ka mid ah. Jaantus ka badan moodooyinka badan ee suuqa yaal.
Qalabkan faraha ee isku dhafan ayaa ah mid aad u gaar ah. Tan iyo markii ay ku saleysan tahay farsamada indhaha. Sidan oo kale, moodeelka 'OLED' wuxuu soo saaraa falaadho u ifiya farta isticmaalaha. Faraha ayaa loo gudbinayaa qaybta iyadoo loo marayo shaashaddamaaddaama qaybta ay ka hooseyso dhalada.
Haddii kale, DOOGEE V wuxuu leeyahay 8GB RAM iyo 128GB keyd gudaha ah. Waxba lagama sheegin processor-keeda xilligan. Ku saabsan batteriga, qalabku wuxuu leeyahay a 4.000 mAh batari oo si dhakhso leh u shaqeeya. Shaki la'aan waa batari ballan qaadaya inuu bixiyo madax-bannaanid badan.
Mid kale oo ka mid ah awooda taleefannada casriga ahi waa kamaraddiisa dambe. Shirkaddu ma awoodin inay iska caabbiso isbeddelka kamaradaha laba-geesoodka ah. Sidaas, Waxaan wajaheynaa labo kamarad oo ku taal dhabarka 16 + 8 MP oo leh aaladda 'Sony'. Marka waxaan fileynaa tayo fiican sawirada.
DOOGEE V waxaa lafilayaa inuu suuqa Yurub soo galo dhamaadka bisha Maarso ama horaanta Abriil. Waxba lagama soo saarin qiimaheeda. In kasta oo hubaal toddobaadyada soo socda dhammaan xogta ku saabsan taleefanka la ogaan doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » DOOGEE V: Calaamadaha cusub ee sumadda ee lagu soo bandhigay MWC 2018
Tonin Velazquez dijo
Jawaab Toñin Velazquez
Huawei sidoo kale wuxuu ku biirayaa barnaamijka Android Go